Ebidoro Wikipedia na mbụ dịka English Wikipedia na 15 Jenụwarị 2001, iji wee kwado Nupedia, ezigbo akwụkwọ ederede bụ nke emechigoro.( defunct encyclopedia). Ugbu a ọ bụ ndị Wikimedia Foundation, a non-profit organization nke Maazị Jimmy Wales bụ otu n’ime ndị bi
1.1 Usoro ndezi
1.2 Ndị ndezi na-edekọ mgbanwe na akụkọ site na ịlele ọdịiche dị n'etiti ngbanwe abụọ nke ibe - nke a maara dị ka "diffs"; egosiri mgbanwe n'etiti nsụgharị abụọ na uhie.
1.3 Ndị odee nwere ike dezie na-amaghị aha; N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, a na-edekọ adreesị IP ha dị ka aha onye edemede. A na-edobe ndezigharị gara aga na akụkọ Wikipedia, ma bụrụkwa nke a na-ahụ ya site na ibe "edit akụkọ ihe mere eme" nke edobere n'usoro oge, na-eme ka enwere ike ịhụ ụdị mbụ nke ibe ọ bụla n'oge ọ bụla.
1.4 A na-eme mgbanwe na Wikipedia ozugbo na Weebụ, na-enweghị nyocha nke ndị ọgbọ. Nkà ihe ọmụma Wikipedia bụ na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị nwere ezi nzube, ndị na-edezi ihe ọmụma ga-eji nwayọọ nwayọọ na-emezi akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'obosara, omimi na izi ezi, na, na-enye oge zuru ezu, eziokwu ga-emeri na ọbụnadị aghụghọ ga-ejide ma mezie ya. Ya mere, Wikipedia na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ka ọ dezie, ma e wezụga maka ndị ọrụ amachibidoro maka mmebi iwu na-adịgide adịgide ka usoro ikpe ikpe ogologo gasịrị. N'otu aka ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla nwere ike dezie; A na-enwekwa nkwarụ mgbe ụfọdụ nwa oge maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke akụkọ n'ihi mbibi na-adịgide adịgide ma ọ bụ esemokwu edozibeghị n'etiti ndị nkwado. Wikipedia ekwuputabeghị nke ọ bụla n'ime akụkọ ya "zuru oke" ma ọ bụ "mechara".
1.5 Dị ka akwụkwọ nkà ihe ọmụma izugbe, Wikipedia na-achọ ịkọwa ọtụtụ isiokwu dị ka o kwere mee. Ọ na-ekpuchi isiokwu ndị a na-ahụkarị na akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọdịnala, yana ọtụtụ isiokwu ọdịnala na nka na-adịghị adị n'ọrụ ndị dị otú ahụ ma ọ bụ kpọchie ya na ntụnyere isiokwu pụrụ iche. Na mgbakwunye na uto na-enweghị atụ n'ọnụọgụ isiokwu, nkezi ogologo nke isiokwu ọ bụla amụbaala nke ọma, dị ka ọnụ ọgụgụ nke "akụkọ pụtara" ghọtara maka ịdị elu ha dị elu. Otú ọ dị, nnukwu oghere dị na mkpuchi ọrụ a ka dị, na ọtụtụ akụkọ anaghị akọwapụta ya nke ọma n'ụzọ kwekọrọ na amụma nchịkọta akụkọ Wikipedia.
1.6 Otu ike ama ama nke Wikipedia bụ oge ya. Dị ka ọ na-adị, a na-ebipụta akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọhụrụ kwa afọ ole na ole, n'ihi na ihe ọmụma ha bịara doo anya na ọ bụ ihe na-adịghịzizi emezi. Echiche nke idegharị na-aga n'ihu, bụ nke a na-edegharị akwụkwọ nkà ihe ọmụma dum ma na-ebipụta kwa afọ ole na ole, dochie nke a ma ugbu a ọtụtụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma na-arụ ọrụ. Wikipedia na-ewegharịgharị na-aga n'ihu ruo oke ya - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ niile nwere ike ịmegharị ya n'oge ọ bụla, na-ekwe ka ọrụ ahụ tinye ihe omume dị ugbu a. Dị ka ihe atụ, ndị nta akụkọ na-edekarị akụkọ banyere ala ọma jijiji ahụ mere n’Oké Osimiri India n’afọ 2004 ná mbipụta Bekee n’ụbọchị ndị sochiri ihe omume ahụ.
1.7 Atumatu na ntuziaka
1.8 A na-eme mkpebi na ọdịnaya na usoro nhazi nke Wikipedia site na ime mkpebi nkwenye na, mgbe ụfọdụ, site na ịtụ vootu; Jimmy Wales na Wikimedia Foundation jigidere ikpe ikpeazụ. Wikipedia nwere ọtụtụ atumatu na ntụzịaka, mepụtakwara site na nkwenye, na-eduzi ọrụ na ọrụ a, na-ekpuchi omume, ọdịnaya metụtara na okwu gbasara iwu. Otu n'ime ihe kachasị mkpa na-ekwu na a ga-ederịrị isiokwu site na "echiche na-anọpụ iche", na-egosipụta echiche niile dị ịrịba ama na ihe iseokwu tinyere ihe akaebe na-akwado ha - ya mere, kama ịchọ ịchọpụta ihe bụ eziokwu nke isiokwu ha, isiokwu na-anwa anwa. ịkọwa ha n'eleghị mmadụ anya n'ihu site n'echiche niile dị mkpa. Ederede onye ọ bụla nwere nkwupụta nkwutọ, mmebi iwu nwebiisinka, na ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike ibute ụgwọ iwu ma ọ bụ na-emebi Wikipedia na-ezobe kpamkpam site na iji usoro akpọrọ "Nlebaanya".
1.9 Ọdịnaya efu na ikike
1.10 Ihe nkwado na Wikipedia bụ GNU Free Documentation License (GFDL), otu n'ime ọtụtụ ikikere nwebiisinka nke na-enye ohere ikesagharị, imepụta ọrụ ewepụtara na iji ọdịnaya azụmaahịa. Ikikere a na-enye ndị ndezi Wikipedia aka idowe ikike nwebiisinka nke ọrụ ha, mana na-enye ohere ka ndị ọzọ wulite n'ọrụ ahụ wee bipụta ya, ọ bụrụhaala na akwadoro onye edemede mbụ yana GFDL kpuchirikwa ọrụ ewepụtara ya. Ikikere a na-ahụ na enwere ike dezie Wikipedia n'efu; A na-edekọ onyinye onye odee ọ bụla maka ụmụ ọmụmụ na nchekwa data. Larry Sanger ekwuola na inwe GFDL dị ka "nkwenye nke nnwere onwe bụ ihe mkpali siri ike ịrụ ọrụ na akwụkwọ nkà ihe ọmụma efu".
1.11 Wikipedia nwekwara ihe onyonyo na mgbasa ozi ndị ọzọ nke ndị ndezi ya ekepụtaghị, mana ọ dị na mpaghara ọha. A na-ewepụta ọdịnaya ndị ọzọ dị na Wikipedia n'okpuru usoro nwebisiinka dị iche iche ma ọ bụ ikikere dakọtara na GFDL, dị ka ikikere Creative Commons. E gosipụtara ihe ndị ọzọ dị ka akara ụlọ ọrụ, ihe nlele egwu, ma ọ bụ foto akụkọ nwebiisinka nwere nkwuputa eji eme ihe ziri ezi n'okpuru iwu nwebiisinka United States. Wikimedia Commons, ebe nchekwa mgbasa ozi na ọrụ nwanne nwanyị nke a na-echekwa ọtụtụ onyonyo Wikipedia, na-enyekwa ikike nwebiisinka ndị ọzọ, mana anaghị anabata onyonyo eji eme ihe ziri ezi. Ndị ntinye aka nwere ike ịhọrọ inye onyinye ha ọtụtụ ikike n'okpuru ma GFDL na ngalaba ọha, ma ọ bụ GFDL na ikikere ndị ọzọ, na-enye ndị ọzọ ohere iji ọdịnaya n'okpuru nke ọ bụla n'ime ikike ndị a.
1.12 Ikikere mepere emepe Wikipedia na-akwalite ojiji ọhụrụ na ngosipụta nke ọdịnaya ya. Ụdị a na-ekwu okwu dị maka ụfọdụ akụkọ n'ụdị Ogg Vorbis, ebe ọ bụ na usoro MP3 a na-ejikarị eme ihe na-ekpuchi ya site na ikikere ngwanrọ nke na-eme ka nkesa n'okpuru ikike efu. Ụdị Wikipedia guzoro ọtọ dị ka Lexipedia dị maka ngwaọrụ ejiri aka. Ụmụaka SOS na-ekesa akwụkwọ nkà ihe ọmụma na CD (Nhọrọ CD Wikipedia 2006). Mpempe akwụkwọ edebatara nke Wikipedia ahọpụtara dịkwa site na PediaPress, mbipụta na-achọ ọrụ. Ọrụ dị n'ime Wikipedia na-arụ ọrụ na "Wikipedia 1.0", nchịkọta akụkọ Wikipedia enyochagoro maka izi ezi ma dị njikere maka ibipụta ma ọ bụ ọkụ na CD. E kesara Wikipedia Wikipedia German na DVD; A na-ahazi ụdị mbipụta na dijitalụ nke mbipụta Bekee.
2 Akụkọ ihe mere eme
3 Ode akwụkwọ na njikwa
4 Akụrụngwa na ngwaike
5 Mbipụta asụsụ
6 Ntụkwasị obi na ele mmadụ anya n'ihu
6.1 Nyocha agụmakwụkwọ
Njirimara[mezie | dezie ebe o si]
Usoro ndezi[mezie | dezie ebe o si]
Ndị ndezi na-edekọ mgbanwe na akụkọ site na ịlele ọdịiche dị n'etiti ngbanwe abụọ nke ibe - nke a maara dị ka "diffs"; egosiri mgbanwe n'etiti nsụgharị abụọ na uhie.[mezie | dezie ebe o si]
Ndị odee nwere ike dezie na-amaghị aha; N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, a na-edekọ adreesị IP ha dị ka aha onye edemede. A na-edobe ndezigharị gara aga na akụkọ Wikipedia, ma bụrụkwa nke a na-ahụ ya site na ibe "edit akụkọ ihe mere eme" nke edobere n'usoro oge, na-eme ka enwere ike ịhụ ụdị mbụ nke ibe ọ bụla n'oge ọ bụla.[mezie | dezie ebe o si]
A na-eme mgbanwe na Wikipedia ozugbo na Weebụ, na-enweghị nyocha nke ndị ọgbọ. Nkà ihe ọmụma Wikipedia bụ na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị nwere ezi nzube, ndị na-edezi ihe ọmụma ga-eji nwayọọ nwayọọ na-emezi akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'obosara, omimi na izi ezi, na, na-enye oge zuru ezu, eziokwu ga-emeri na ọbụnadị aghụghọ ga-ejide ma mezie ya. Ya mere, Wikipedia na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ka ọ dezie, ma e wezụga maka ndị ọrụ amachibidoro maka mmebi iwu na-adịgide adịgide ka usoro ikpe ikpe ogologo gasịrị. N'otu aka ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla nwere ike dezie; A na-enwekwa nkwarụ mgbe ụfọdụ nwa oge maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke akụkọ n'ihi mbibi na-adịgide adịgide ma ọ bụ esemokwu edozibeghị n'etiti ndị nkwado. Wikipedia ekwuputabeghị nke ọ bụla n'ime akụkọ ya "zuru oke" ma ọ bụ "mechara".[mezie | dezie ebe o si]
Dị ka akwụkwọ nkà ihe ọmụma izugbe, Wikipedia na-achọ ịkọwa ọtụtụ isiokwu dị ka o kwere mee. Ọ na-ekpuchi isiokwu ndị a na-ahụkarị na akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọdịnala, yana ọtụtụ isiokwu ọdịnala na nka na-adịghị adị n'ọrụ ndị dị otú ahụ ma ọ bụ kpọchie ya na ntụnyere isiokwu pụrụ iche. Na mgbakwunye na uto na-enweghị atụ n'ọnụọgụ isiokwu, nkezi ogologo nke isiokwu ọ bụla amụbaala nke ọma, dị ka ọnụ ọgụgụ nke "akụkọ pụtara" ghọtara maka ịdị elu ha dị elu. Otú ọ dị, nnukwu oghere dị na mkpuchi ọrụ a ka dị, na ọtụtụ akụkọ anaghị akọwapụta ya nke ọma n'ụzọ kwekọrọ na amụma nchịkọta akụkọ Wikipedia.[mezie | dezie ebe o si]
Otu ike ama ama nke Wikipedia bụ oge ya. Dị ka ọ na-adị, a na-ebipụta akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọhụrụ kwa afọ ole na ole, n'ihi na ihe ọmụma ha bịara doo anya na ọ bụ ihe na-adịghịzizi emezi. Echiche nke idegharị na-aga n'ihu, bụ nke a na-edegharị akwụkwọ nkà ihe ọmụma dum ma na-ebipụta kwa afọ ole na ole, dochie nke a ma ugbu a ọtụtụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma na-arụ ọrụ. Wikipedia na-ewegharịgharị na-aga n'ihu ruo oke ya - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ niile nwere ike ịmegharị ya n'oge ọ bụla, na-ekwe ka ọrụ ahụ tinye ihe omume dị ugbu a. Dị ka ihe atụ, ndị nta akụkọ na-edekarị akụkọ banyere ala ọma jijiji ahụ mere n’Oké Osimiri India n’afọ 2004 ná mbipụta Bekee n’ụbọchị ndị sochiri ihe omume ahụ.[mezie | dezie ebe o si]
Atumatu na ntuziaka[mezie | dezie ebe o si]
A na-eme mkpebi na ọdịnaya na usoro nhazi nke Wikipedia site na ime mkpebi nkwenye na, mgbe ụfọdụ, site na ịtụ vootu; Jimmy Wales na Wikimedia Foundation jigidere ikpe ikpeazụ. Wikipedia nwere ọtụtụ atumatu na ntụzịaka, mepụtakwara site na nkwenye, na-eduzi ọrụ na ọrụ a, na-ekpuchi omume, ọdịnaya metụtara na okwu gbasara iwu. Otu n'ime ihe kachasị mkpa na-ekwu na a ga-ederịrị isiokwu site na "echiche na-anọpụ iche", na-egosipụta echiche niile dị ịrịba ama na ihe iseokwu tinyere ihe akaebe na-akwado ha - ya mere, kama ịchọ ịchọpụta ihe bụ eziokwu nke isiokwu ha, isiokwu na-anwa anwa. ịkọwa ha n'eleghị mmadụ anya n'ihu site n'echiche niile dị mkpa. Ederede onye ọ bụla nwere nkwupụta nkwutọ, mmebi iwu nwebiisinka, na ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike ibute ụgwọ iwu ma ọ bụ na-emebi Wikipedia na-ezobe kpamkpam site na iji usoro akpọrọ "Nlebaanya".[mezie | dezie ebe o si]
Ọdịnaya efu na ikike[mezie | dezie ebe o si]
Ihe nkwado na Wikipedia bụ GNU Free Documentation License (GFDL), otu n'ime ọtụtụ ikikere nwebiisinka nke na-enye ohere ikesagharị, imepụta ọrụ ewepụtara na iji ọdịnaya azụmaahịa. Ikikere a na-enye ndị ndezi Wikipedia aka idowe ikike nwebiisinka nke ọrụ ha, mana na-enye ohere ka ndị ọzọ wulite n'ọrụ ahụ wee bipụta ya, ọ bụrụhaala na akwadoro onye edemede mbụ yana GFDL kpuchirikwa ọrụ ewepụtara ya. Ikikere a na-ahụ na enwere ike dezie Wikipedia n'efu; A na-edekọ onyinye onye odee ọ bụla maka ụmụ ọmụmụ na nchekwa data. Larry Sanger ekwuola na inwe GFDL dị ka "nkwenye nke nnwere onwe bụ ihe mkpali siri ike ịrụ ọrụ na akwụkwọ nkà ihe ọmụma efu".[mezie | dezie ebe o si]
Wikipedia nwekwara ihe onyonyo na mgbasa ozi ndị ọzọ nke ndị ndezi ya ekepụtaghị, mana ọ dị na mpaghara ọha. A na-ewepụta ọdịnaya ndị ọzọ dị na Wikipedia n'okpuru usoro nwebisiinka dị iche iche ma ọ bụ ikikere dakọtara na GFDL, dị ka ikikere Creative Commons. E gosipụtara ihe ndị ọzọ dị ka akara ụlọ ọrụ, ihe nlele egwu, ma ọ bụ foto akụkọ nwebiisinka nwere nkwuputa eji eme ihe ziri ezi n'okpuru iwu nwebiisinka United States. Wikimedia Commons, ebe nchekwa mgbasa ozi na ọrụ nwanne nwanyị nke a na-echekwa ọtụtụ onyonyo Wikipedia, na-enyekwa ikike nwebiisinka ndị ọzọ, mana anaghị anabata onyonyo eji eme ihe ziri ezi. Ndị ntinye aka nwere ike ịhọrọ inye onyinye ha ọtụtụ ikike n'okpuru ma GFDL na ngalaba ọha, ma ọ bụ GFDL na ikikere ndị ọzọ, na-enye ndị ọzọ ohere iji ọdịnaya n'okpuru nke ọ bụla n'ime ikike ndị a.[mezie | dezie ebe o si]
Ikikere mepere emepe Wikipedia na-akwalite ojiji ọhụrụ na ngosipụta nke ọdịnaya ya. Ụdị a na-ekwu okwu dị maka ụfọdụ akụkọ n'ụdị Ogg Vorbis, ebe ọ bụ na usoro MP3 a na-ejikarị eme ihe na-ekpuchi ya site na ikikere ngwanrọ nke na-eme ka nkesa n'okpuru ikike efu. Ụdị Wikipedia guzoro ọtọ dị ka Lexipedia dị maka ngwaọrụ ejiri aka. Ụmụaka SOS na-ekesa akwụkwọ nkà ihe ọmụma na CD (Nhọrọ CD Wikipedia 2006). Mpempe akwụkwọ edebatara nke Wikipedia ahọpụtara dịkwa site na PediaPress, mbipụta na-achọ ọrụ. Ọrụ dị n'ime Wikipedia na-arụ ọrụ na "Wikipedia 1.0", nchịkọta akụkọ Wikipedia enyochagoro maka izi ezi ma dị njikere maka ibipụta ma ọ bụ ọkụ na CD. E kesara Wikipedia Wikipedia German na DVD; A na-ahazi ụdị mbipụta na dijitalụ nke mbipụta Bekee.[mezie | dezie ebe o si]
Wikipedia malitere dị ka ọrụ nkwado maka Nupedia, ọrụ ntanetịime ihe ọmụma n'efu nke ndị ọkachamara dere akụkọ ya wee nyochaa ya site na usoro nkịtị. E hiwere Nupedia na 9 akpụkpọ ụkwụ 2008, n'okpuru ikike nke Bomis, Inc, ụlọ ọrụ portal webụ. Ndị isi ya bụ Jimmy Wales, Bomis CEO, na Larry Sanger, onye nchịkọta akụkọ maka Nupedia na mechara Wikipedia. Enyere Nupedia ikike na mbụ n'okpuru ikikere Nupedia Open Content License, na-atụgharị gaa na GFDL tupu ntọala Wikipedia na agbamume Richard Stallman.
Na 29 Jenụwarị 2005, Larry Sanger tụrụ aro na listi nzipu ozi Nupedia ka imepụta wiki dị ka ọrụ “feder” maka Nupedia. Ewepụtara Wikipedia na 15 Jenụwarị 2001, dị ka otu mbipụta asụsụ bekee na http://www.wikipedia.com/, ma Sanger mara ọkwa na ndepụta nzipu ozi Nupedia. Amụma Wikipedia nke "nlegharị anya na-anọpụ iche" bụ ahaziri n'ime ọnwa mbụ ya, ma yie amụma Nupedia nke mbụ "na-enweghị isi". Ma ọ bụghị ya, enwere iwu ole na ole na mbụ na Wikipedia na-arụ ọrụ n'adabereghị na Nupedia. Wikipedia nwetara nkwado mbụ site na Nupedia, Slashdot biputere, na nchọta ihe nchọta. Ọ tolitere ruo ihe dị ka isiokwu 20,000, yana mbipụta asụsụ 18, ka ọ na-erule njedebe nke 2001. O toro na mbipụta asụsụ 26 na njedebe nke 2002, 46 na njedebe nke 2003, yana 161 na njedebe nke 2004. Nupedia na Wikipedia birikọ ọnụ ruo mgbe Sava nke mbụ gbadara, na-adịgide adịgide, na 2003, na ederede ya etinyere na Wikipedia. Larry Sanger na Jimmy Wales bụ ndị haziri Wikipedia.
Wikipedia's English Edition na 30 Maachị 2001, ọnwa abụọ na ọkara ka e hiwechara ya.
Wales na Sanger na-ekwu na echiche nke iji wiki bụ Ward Cunningham's WikiWikiWeb ma ọ bụ Portland Pattern Repository.Àtụ:Citation need Ọ bụ ezie na Wales kwadoro ebumnuche nke ịmepụta akwụkwọ nkà ihe ọmụma ọha na eze na-edezi, Sanger na-abụkarị atụmatụ nke iji wiki. ka iru ihe mgbaru ọsọ ahụ.
N'izo aka na egwu nke mgbasa ozi azụmahịa na enweghị njikwa na Wikipedia nke na-eche na Bekee, ndị ọrụ Wikipedia Spanish gbapụrụ na Wikipedia iji mepụta Enciclopedia Libre na Febrụwarị 2002. Mgbe afọ ahụ gasịrị, Wales kwupụtara na Wikipedia agaghị egosipụta mgbasa ozi, yana webụsaịtị ya. ebugara na wikipedia.org. Ọrụ ndị ọzọ dị iche iche agbapụla na Wikipedia maka ebumnuche ndetu. Wikinfo anaghị achọ echiche na-anọpụ iche ma na-enye ohere nyocha mbụ. Ọrụ ọhụrụ sitere n'ike mmụọ nsọ Wikipedia - dị ka Citizendium, Scholarpedia na Amapedia - ka amalitela ileba anya na njedebe echere na Wikipedia, dị ka amụma ya na nyocha ndị ọgbọ, nyocha mbụ na mgbasa ozi azụmahịa.
Emepụtara Wikimedia Foundation site na Wikipedia na Nupedia na 20 Juun 2003.
Wikimedia Foundation tinyere akwụkwọ ikike nke United States Patent and Trademark Office iji nweta akara Wikipedia® na 17 Septemba 2004. Enyere akara ahụ ọkwa ndebanye aha na 10 Jenụwarị 2006. Japan nyere nchebe akara ahia na 16 Disemba 2004 na na European Union na 20 January. 2005. Teknụzụ akara ọrụ, oke akara ahụ bụ maka: "Nnyefe ozi na ngalaba nke ihe ọmụma encyclopedic izugbe site na ịntanetị”. Enwere atụmatụ ịnye ikike iji ụghalaahịa Wikipedia maka ngwaahịa ụfọdụ, dị ka akwụkwọ ma ọ bụ DVD.
N'ihe dị ka n'afọ 2007, Wikipedia Bekee nwere ihe karịrị nde akụkọ 1.6, na-eme ka ọ bụrụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma kachasị ukwuu enwetụla, kpuchiri ọbụna Yongle Encyclopedia (1407), bụ nke nwere ndekọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 600.
Ode akwụkwọ na njikwa[mezie | dezie ebe o si]
N'oge Disemba 2005, ihe dị ka ndị ọrụ 27,000 mere ma ọ dịkarịa ala ndezi ise na Wikipedia; N'ime ndị a, 17,000 rụrụ ọrụ na mbipụta Bekee. A na-arụ ọrụ nlekọta site na otu ndị ọrụ afọ ofufo; Ndị a gụnyere ndị mmepe, ndị na-arụ ọrụ na ngwa MediaWiki, yana ndị ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi nwere ọkwa ikike dị iche iche gụnyere "onye nlekọta", "bureaucrat" na "onye nchịkwa". Ndị na-elekọta ụlọ na ndị na-arụ ọrụ nwere ike ịkwalite ma ọ bụ wetuo ndị ọrụ n'ọkwa ikike dị iche iche. Ndị nchịkwa bụ nnukwu ndị ọrụ nwere ihe ùgwù pụrụ iche, ma nwee ike ihichapụ ibe, gbochie idezi akụkọ, ma ọ bụ gbochie ndị ọrụ idezi. Agbanyeghị, achọrọ ndị nchịkwa ka ha soro amụma obodo mgbe ha na-egosipụta ike ndị a. A na-enyekarị ikike ndị a site na nkwenye obodo; A na-ahọpụta ndị na-elekọta ụlọ n'oge oge. Imebi ma ọ bụ obere mmebi iwu nwere ike ịkpata ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ ngọngọ nwa oge, ebe ogologo oge ma ọ bụ ihe mgbochi na-adịgide adịgide maka mmebi ogologo oge na nke dị njọ na-enye <citation need> (ma ọ bụ n'aha) Jimmy Wales ma ọ bụ, na Bekee- mbipụta asụsụ, "Kọmitii Arbitration" họpụtara.
A na-enweta ego Wikipedia site na Wikimedia Foundation. Ọnụ ego nke 4th Quarter 2005 bụ $321,000 USD, yana ngwaike na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke mmefu ego. Wikimedia Foundation na-adabere ugbu a na onyinye nke onwe, ma na-ejide ndị na-akpakọba ego mgbe niile; ihe nchikota nke Jenụwarị 2007 welitere ihe karịrị nde $1.
Akụrụngwa na ngwaike[mezie | dezie ebe o si]
Wikipedia na-enweta n'etiti arịrịọ peeji 10,000 na 30,000 kwa nkeji, dabere na oge ụbọchị. Edobela ihe karịrị sava 100 ka ha na-ahụ maka okporo ụzọ.
Arụmọrụ Wikipedia dabere na MediaWiki, ihe emebere nke ọma, sọftụwia sọftụwia wiki mepere emepe edere na PHP ma wukwaa n'elu nchekwa data MySQL. Akụrụngwa na-agụnye atụmatụ mmemme ọgbara ọhụrụ, dị ka asụsụ nnukwu, mgbanwe dị iche iche, usoro ntụgharị maka ndebiri, na ntụgharị URL. MediaWiki nwere ikike n'okpuru GNU General Public License ma na-eji ọrụ Wikimedia niile, yana ọtụtụ ọrụ wiki ndị ọzọ. Na mbụ, Wikipedia na-agba ọsọ na UseModWiki nke Clifford Adams dere na Perl (Phase I), nke na mbụ chọrọ CamelCase maka hyperlinks akụkọ; agbakwunyere brackets okpukpu abụọ ugbu a ma emechaa. Malite na Jenụwarị 2002 (Oge II), Wikipedia malitere ịgba ọsọ na injin wiki PHP nwere nchekwa data MySQL; Ngwanrọ a bụ nke Magnus Manske mere maka Wikipedia. Emezigharịrị ngwa ngwa nke Abụọ ugboro ugboro ka ọ nabata ihe na-abawanye ụbara. Na Julaị 2002 (Oge III), Wikipedia gbanwere gaa na ngwanrọ ọgbọ nke atọ, MediaWiki, nke Lee Daniel Crocker dere na mbụ.
Nchịkọta nke usoro ihe owuwu, Mee 2006. Isi mmalite: Eserese okirikiri nhọrọ ukwuu na Meta-Wiki.
Wikipedia na-agba ọsọ na ụyọkọ Linux raara onwe ya nye na Florida na ebe anọ ndị ọzọ. Wikipedia jiri otu ihe nkesa rụọ ọrụ ruo n'afọ 2004, mgbe agbasawanye ntọala nkesa ka ọ bụrụ ihe owuwu nkesa multitier. Na Jenụwarị 2005, ọrụ a rụrụ na sava 39 raara onwe ya nye dị na Florida. Nhazi a gụnyere otu ihe nkesa nchekwa data nke na-agba MySQL, ọtụtụ sava nchekwa data ohu, sava weebụ 21 na-agba Apache HTTP Server, yana sava cache Squid asaa. Site na Septemba 2005, ụyọkọ nkesa ya etoola ihe ruru sava 100 n'ebe anọ.around the world.
A na-ebu ụzọ bufee arịrịọ ibe na oyi akwa ihu nke sava Squid caching. Arịrịọ na-enweghị ike ịnye site na cache Squid na-ezigara na sava na-edozi ibu na-arụ ọrụ ngwanrọ Perlbal, nke na-enyefe arịrịọ ahụ n'aka otu n'ime sava weebụ Apache maka iwepụta ibe site na nchekwa data. Sava webụ ahụ na-ebuga ibe dị ka achọrọ ya, na-arụpụta ibe maka mbipụta asụsụ niile nke Wikipedia. Ka iwelie ọsọ n'ihu, a na-echekwa ibe akwụkwọ maka ndị ọrụ na-amaghị aha n'ime sistemụ faịlụ ruo mgbe ọ mebiri emebi, na-enye ohere ka ịfefe ibe ya kpamkpam maka ịnweta ibe ndị a na-ahụkarị. Iji mee ka oge nzaghachi dịkwuo ngwa ngwa, Wikimedia na-ewulite netwọk zuru ụwa ọnụ nke sava caching, na-amalite site na sava caching atọ na France. Ụyọkọ abụọ buru ibu na Netherlands na Korea na-ejikwa ọtụtụ ibu okporo ụzọ Wikipedia.
Mbipụta asụsụ[mezie | dezie ebe o si]
A kọwawo Wikipedia dị ka "mgbalị imepụta na ikesa akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'efu nke kachasị mma enwere ike nye onye ọ bụla nọ n'ụwa n'asụsụ nke ha". Enwere mbipụta asụsụ 250 nke Wikipedia ugbu a; N'ime ndị a, 14 n'elu nwere ihe karịrị 100,000 akụkọ na n'elu 131 nwere ihe karịrị 1,000 isiokwu. Dabere na ọrụ nha ndị na-ege ntị Internet Alexa, subdomain Bekee (en.wikipedia.org) na-enweta ihe dịka 55% nke okporo ụzọ Wikipedia, yana 45% nke fọdụrụ kewara n'etiti asụsụ ndị ọzọ. A na-edobe mbipụta asụsụ dị iche iche na atumatu zuru ụwa ọnụ dị ka "echiche na-anọpụ iche," n'agbanyeghị na ha nwere ike ịdịgasị iche n'echiche na omume aghụghọ.
Ejikọtaghị mbipụta nke asụsụ, na akụkọ nke otu mbipụta agaghị adaba na ndị ogbo ha na mbipụta ọzọ. A na-agba ndị ndezi asụsụ ọtụtụ asụsụ ume ka ha jiri aka ha sụgharịa akụkọ; anabataghị ntụgharị asụsụ akpaghị aka nke ọma. Edemede atụgharịrị na-anọchi anya naanị ntakịrị akụkụ akụkọ n'ọtụtụ mbipụta. Akụkọ dị n'ihe karịrị otu asụsụ na-enye njikọ "InterWiki" n'akụkụ aka ekpe ha, nke jikọtara ya na akụkọ ibe ya na mbipụta ndị ọzọ. A na-ekekọrịta onyonyo na mgbasa ozi ndị ọzọ na-abụghị nke ọnụ n'etiti mbipụta asụsụ dị iche iche site na ebe nchekwa Wikimedia Commons.
Ntụkwasị obi na ele mmadụ anya n'ihu[mezie | dezie ebe o si]
Wikipedia na-amasị ikike nke akwụkwọ ndị ọgbọ nyochara karịa ikike nke ndị ọkachamara. Wikipedia anaghị achọ ka ndị ntinye aka ya nye aha iwu ha ma ọ bụ nye ozi ndị ọzọ iji gosi njirimara ha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ntinye aka bụ ndị ọchịchị n'ubi ha, Wikipedia chọrọ ka e jiri isi mmalite ndị ebipụtara kwado ọbụna onyinye ha. Ihe ndọghachi azụ nke usoro nrụtụ aka a bụ na ndị na-agụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ikpebi ntụkwasị obi nke isi mmalite edepụtara.
Wikipedia na-anwa ileba anya na nsogbu nke nhụsianya nke usoro ihe omume, na imegide ndị editọ na-anụ ọkụ n'obi na-achọ imetụta ngosi nke isiokwu n'ụzọ na-adịghị mma, site n'ịkwụsi ike n'echiche na-anọpụ iche. Wikipedia na-asụ Bekee ewebatala ọnụ ọgụgụ nke a na-ekpebi ogo akụkọ; mbipụta ndị ọzọ nakweere nke a. Ihe dị ka 1200 agafeela usoro njirisi siri ike iji ruo ọkwa kachasị elu, ọkwa "akụkọ pụtara"; isiokwu ndị dị otú ahụ bụ ka e bu n'obi nye nkọwa nke ọma, nke edere nke ọma nke isiokwu ha, ma kwado ya site n'ọtụtụ ntụaka maka akwụkwọ ndị ọgbọ nyochara..
Nyocha agụmakwụkwọ[mezie | dezie ebe o si]
Nnyocha na-egosi na Wikipedia na-enye ezigbo mmalite maka nyocha, ma mgbe ụfọdụ ọ na-enwe nsogbu na ihe na-ezighị ezi. Mana nyocha nke Nature jiri tụnyere Wikipedia na Encyclopædia Britannica tụrụ aro ka ọ dị nso n'ogo nke ziri ezi n'ihe gbasara isiokwu sayensị okike ya; Otú ọ dị, Encyclopædia Britannica, Inc., kọwara ọmụmụ ihe a dị ka "ndị nwere ntụpọ na-egbu egbu", nke Nature mesịrị zaghachi ya, na-ekwupụta na ọmụmụ ya bụ nnọpụiche zuru oke. Ọmụmụ ihe ndị ọzọ kwubiri na mkpuchi akụkọ ihe mere eme Wikipedia na-agbasawanye ma dị omimi karịa nke Encarta, ebe ọ bụ ezie na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, yana na mmebi iwu pụtara ìhè na-alaghachikarị ngwa ngwa. N'ime nyocha nke Wikipedia dị ka obodo, nwa akwụkwọ PhD nke akụ na ụba Andrea Ciffolilli rụrụ ụka na ọnụ ahịa azụmahịa dị ala nke isonye na wiki software na-emepụta ihe na-eme ka mmepe mmekọrịta, yana na usoro "ihe mmepụta ihe" na-akwado nsonye. A na-ele Wikipedia anya dị ka nnwale mmadụ; Onye nchoputa Jimmy Wales ekwuola na ebum n'obi abụghị otu, n'agbanyeghị na nke ahụ bụ nsonaazụ.
Criticism and controversy[mezie | dezie ebe o si]
Awards[mezie | dezie ebe o si]
In the media[mezie | dezie ebe o si]
Related projects[mezie | dezie ebe o si]
See also[mezie | dezie ebe o si]
↑ Simon Waldman, http://www.guardian.co.uk/online/news/0,12597,1335892,00.html Who knows?, The Guardian, 26 Ọktoba 2004
↑ Danah Boyd, "Academia and Wikipedia", Many-to-Many, 4 Jenụwarị 2005.
↑ Larry Sanger, "Why Wikipedia Must Jettison Its Anti-Elitism", Kuro5hin, 31 Disemba 2004.
↑ Ahrens, Frank (2006-07-09). Death by Wikipedia: The Kenneth Lay Chronicles. The Washington Post. Retrieved on 2006-11-01.
↑ "http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_policies_and_guidelines List of policies and guidelines]", English Wikipedia. Retrieved on 2007-01-31.
↑ Kpọpụta njehie: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Rosenzweig_2006
↑ Richard Stallman. "The Free Encyclopedia Project", Free Software Foundation, 1999.
Keezi njikọ[mezie | dezie ebe o si]
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipidia&oldid=75084
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 17 Ọnwa anọ 2022, mgbe 17:39